दैैलेख । दैलेखको पश्चिममा पर्ने आठबिस नगरपालिका–८ स्थित लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी विद्यालयमा आगो बलेको थाहा पाए मात्र पढ्न आउने गरेका छन् । २०६० सालमा स्थापित उक्त विद्यालय दलित समुदायको बीचमा छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा सबै विद्यार्थी पनि दलित परिवारकै हुन्छन् ।...
निजी विद्यालयको भर्ना शुल्कमा मनोमानी
धनगढी (अस) । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरूले मनोमानी रूपमा भर्ना शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क निर्धारणदेखि नियमनको अधिकार अहिले स्थानीय तहसँग छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारले नियमनमा चासो नदेखाएकै...
कलेज पढ्न शुरू गरेपछि पढाइसँगै विभिन्न शीर्षकमा खर्च बढ्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक कामका लागि अभिभावकसँग खर्च मागिरहन पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । यदि तपाईंको स्थिति पनि यस्तै छ भने खर्च जुटाउन पढाइसँगै पार्ट टाइम जब गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो किसिमको पार्ट टाइम जब छनोट गर्नुहोस्, जसले आफ्नो करीअर अगाडि बढ...
नगरपालिकामै शून्य दरबन्दीको विद्यालय
सल्यान (अस) । सल्यानको शारदा नगरपालिका–१३ लेखटाकुरामा रहेको सृजनशील प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नै नरहेको पाइएको छ । बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म सञ्चालित उक्त विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी शून्य रहेको हो । २०६६ सालमा स्थापित यो विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नभएपछि निजी शिक्षकले अध्यापन गर्दै आएका छन...
विद्यालय कसरी छान्ने ?
नेपालका हिमाली भेगबाहेक अन्य स्थानमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको छ । विद्यार्थीका साथै अभिभावकका लागि समेत यो चासो र जिज्ञासाको विषय हो । अझै पनि कतिपय आमाबुबालाई सही विद्यालय छनोटमा अन्योल हुने गरेको छ । यही अन्योलकै कारण उनीहरू छोराछोरीको भर्ना नगरीकनै विद्यालय पठाइरहेका छन् । आफ्ना छोराछोरी कुन...
गजेन्द्रनारायण अस्पताल परिसरमा नर्सिङ क्याम्पस बन्दै
राजविराज (अस) । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसरमा नर्सिङ क्याम्पस बन्ने भएको छ । संसदीय विकास कोषको रू. ४ करोड सहयोगमा बन्न लागेको उक्त क्याम्पसको हालै शिलान्यास भएको छ । सप्तरीको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद तथा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्...
निजी छाड्दै, सामुदायिक रोज्दै विद्यार्थी
नेपालगञ्ज । बाँकेमा शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले अंगे्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन थालेपछि विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन् दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप बढ्...
निजी छाड्दै, सामुदायिक रोज्दै विद्याथी
नेपालगञ्ज बाँकेमा शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको छ । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले अंगे्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन थालेपछि विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन् । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकास्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको...
अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने बहानामा चर्काे शुल्क असुली
प्यूठान (अस) । प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी भाषामा पठनपाठन गराउने बहानामा अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेका छन् । विद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा पढाउने शिक्षकको तलब खुवाउन, पोशाक लगायत जुटाउन भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । नेपालको संविधानले आ...
लगानीका लागि नेपाल अनुकूल:प्रम ओली
काठमाडौं (अस) । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण बनेको दाबी गर्नुहुँदै नेपालमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चित भएकोे र त्यो नभए भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको बताउनुभएको छ । संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रले १३०औं मे दिवसका अवसरमा बुधवार राजधानीमा आयोजना ग...